Nayakhabar.com: कान दुखेर अस्पताल जाँदा भेटियो कानभित्र २६ वटा साङ्ला !
कान दुखेर अस्पताल जाँदा भेटियो कानभित्र २६ वटा साङ्ला !
एक व्यक्ति कान दुखेपछि जचाउनका लागि अस्पताल पुगे । जब उनलाई चिकित्सकले चेकजाँच गरे, तब चिकित्सक समेत आश्चर्यमा परे । उनको कानभित्र साङ्लोको एउटा परिवार नै भेटियो अर्थात् साङ्लोले उनको कानमा घर नै बनाएको रहेछ ।
चीनको गोंगडोंग राज्यस्थित एक उद्योगमा काम गर्ने लि मध्यरातमा कान बेस्सरी दुखेपछि बिउँझिए । उनले दखेको कानभित्र औला हाल्दा केही भएको अनुभव गरे र उनका सँगै रहेका साथीलाई टर्च बालेर हेरिदिन आग्रह गरे । तर, उनका साथीले केही देखेनन् ।
१९ वर्षका ली भोलिपल्ट बिहानै जचाउँनाका लागि अस्पताल गए, त्यहाँ उनको इन्डोस्कपी गरियो र उनको कानमा साङ्लो बसेको भेटियो । एक साङ्लोले एक हप्ता अगाडि उनको कानमा आफ्नो बासस्थान बनाएकी थिइ र त्यही कानमा नै अण्डा पारेर २५ वटा बच्चा पनि जन्माएकी थिई । ली जचाँउन जाँदा ती साङ्लाहरू सानो लामखुट्टे जत्रा मात्र थिए ।
उनको कानबाट ती साङ्लाहरू विषेश प्रकारको औषधीको प्रयोग गरेर निकालियो । पछि चिकित्सकहरूले लीलाई अस्पताल नपुगेको भए, उसको कान नै प्वाल पर्न सक्ने सम्भावना रहेको बारे जानकारी गराएको सञ्चारमाध्मयले जनाएका छन् ।
Posted by Kalpana at 00:49